अन्तत: विभाजन भयो सत्ता गठबन्धन, ओलीसँग गठबन्धन गर्ने देउवाको तयारी ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
अन्तत: विभाजन भयो सत्ता गठबन्धन, ओलीसँग गठबन्धन गर्ने देउवाको तयारी ?
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश निष्कृय हुन्छ न १४ सांसद पदमुक्त गर्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको मु’द्दाको छिनाफानो हुन्छ । एकातर्फ अध्यादेश अर्कातर्फ दल विभाजन अ’वै’ध ठहर गराउने गरी दायर मु’द्दाको भयो । यसकारण मन्त्रिपरिषद विस्तारमा अलमल भएको छ ।
गठबन्धनका दलहरुमध्ये नेकपा एस र जसपा अध्यादेश निष्कृय नभई मन्त्रीको नाम बुझाएमा फेरि दल फुट्नसक्ने भन्दै सतर्क छन् । नेकपा एस ५ र जसपा ४ सांसद मिलेर फुटाउन सक्ने अवस्था छ । मन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन् ।
अदालतमा धेरै विषय अड्कन थालेको छ । संवैधानिक परिषदले गरेको संवैधानिक निकायका नियुक्ति खारेजीविरुद्ध परेको मु’द्दामा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशरे जबरा रहँदा प्रश्न उठाइयो । प्रधानन्यायाधीशले आफू इजलासमा नरहने भन्दै निस्किदिए । तर, यसमा मु’द्दामाथि मु’द्दाको खात लागेर अनिश्चित बनेको छ । यसमा पनि शक्तिको अभ्यास चतुरतापूर्वक भएको आँकलन गर्न थालिएको छ । यसले पनि गठबन्धनभित्र खटपट बढाएको छ ।
पूर्वमन्त्री हृदयश त्रिपाठीले अहिलेको गठबन्धन तोडिनसक्ने भनेका छन् । काँग्रेस र एमाले मिलेर देशलाई अर्ली इलेक्शनमा लानसक्ने अनुमानहरु हुन थालेका छन् । यसले गठबन्धनमा दु’र्घ’ट’ना हुनसक्ने सम्भावनाको संकेतहरु गर्न थालेको छ ।
सत्ता गठबन्धनमा कुनैपनि बेला दु’र्घ’ट’नाको संकेतहरु देखिनथालेका छन् । २ महिनासम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार हुननसक्नु र एकपछि अर्को नयाँ चुनौती विकास हुनुले त्यो संकेतलाई बल पुगेको छ ।